रोचक Archives - राष्ट्रखबर-Nepal's Popular Digital Newspaper
चर्चित ब्युटी क्रिम फेयर एण्ड लभ्लीको नाम परिवर्तन हुने भएको छ । गोरोपनालाई बढावा दिने भन्दै विज्ञापन गर्दै आएको फेयर एण्ड लभ्लीमाथि रंगभेदी भएको आरोप लागेसँगै निर्माता कम्पनी युनिलिभरले फेयर एण्ड लभ्लीको मार्केटिङको तरिका तथा ब्राण्ड नाम बदल्ने घोषणा गरेको हो । बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै युनिलिभरले आगामी केही हप्तामै फेयर एण्ड लभ्लीको ब्राण्ड […]
पादेको अभियोगमा ५ सय युरो जरिवाना
जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ सानोतिनो गल्ती पनि निकै भारी पर्न सक्दछ । युरोपेली मुलुक अष्ट्रियामा हालै एकजना युवकलाई पुलिसका अगाडि पाद्नु निकै महंगो सावित भयो । पुलिसले चेकजाँच गर्न खोज्दा नियतबस ठूलो आवाज आउनेगरी पादेको अभियोगमा अष्ट्रियाको पुलिसले एकजना युवकमाथि ५ सय युरो जरिवाना गरेको छ । गत जुन ५ तारेख राजधानी भियनामा उक्त घटना भएको बताइएको […]
स्वाद र गन्ध थाहा नपाउनु कोरोना लक्षण भएको बेलायतको जनस्वास्थ्य विभागबाट पुष्टि
रोचक विश्व समाचार स्वास्थ्य
काठमाडौं । बेलायतको जनस्वास्थ विभागले अब स्वाद र गन्ध यी दुवै थाहा नपाउनु पनि कोरोनाको लक्षण भएको पुष्टि गरेको छ । सोमबार यहाँको नेशनल हेल्थ सर्भिस ९एनएचएस० ले आधिकारिकरूपमा सो कुरा बताएको हो । यसअघि यी लक्षणलाई एनएचएसले समावेश गरेको थिएन । गत महिना यी लक्षण पनि कोरोनासँग सम्बन्धित हुनसक्ने अनुमान मात्रै गरिएको थियो र […]
कुखुराले अण्डा पारेको भए कुनै समाचार बन्ने कुरा थिएन । तर जब कुनै ढुंगाले अण्डा पार्दछ, त्यो दुनियाँकै अनौठो र प्रमुख समाचार बन्दो रहेछ । छिमेकी मुलक चीनमा एउटा अण्डा पार्ने चट्टान छ । देशको दक्षिण पश्चिमी प्रान्त गिझोउमा रहेको त्यो चट्टानले हरेक ३० वर्षमा अण्डा पार्ने गरेको छ । २० मिटर अग्लो तथा ६ मिटर […]
जानी राखौ अनुसन्धानले यौन सन्तुष्टिकाबारे बताएका कुरा
रोचक समाचार स्वास्थ्य
काठमाडौँ — चैत्र १९ । यौन सम्पर्क कुन समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यो सामान्य प्रश्न हो । यसको उत्तर पनि मानिसहरुले अति सरल रुपमा दिन्छन । जब चाहाना हुन्छ तब दुबैजनाको सहमतिमा सम्बन्ध राख्नुपर्दछ । यो कुरा पनि ठिक छ तर बिहान यौन सम्बन्ध राख्नाले स्वास्थमा निकै नै फाइदा पुग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ […]
सुन्दर खुट्टाको कमाल, लगाएर नधोएका मोजा र जुत्ता बेचेर वर्षको एक करोड ४२ लाख कमाई
2018 rastrakhabar No Comment
काठमाडौं, पुस- १५। एक मोडलले आफूले लगाएको मोजा र जुत्ता बेचेर वर्षको एक लाख पाउन्ड (एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ) कमाउँछिन् । कसैले उनको खुट्टा निकै सुन्दर भएको बताएपछि, रोक्सी साइक्स, ३३ ले यसको वास्तविकता जान्ने सोच बनाइन् । लण्डनमा बसेर घरजग्गामा लगानी गर्दै आएकी उनले मानिसहरुले उनको खुट्टामा कत्तिको रुची दिन्छन् भनेर इन्स्टाग्राम पेज […]
बिहे गर्नुभयो त ? कुन उमेरमा बुबाआमा बन्ने नी ?
काठमाडौं, पुस- ९ । बिहे गर्नुभयो त ? कुन उमेरमा बुबाआमा बन्ने नी ? यो प्रश्नको उत्तरमा तपाईं भन्नुहोला, ‘उमेर भएकै छैन ।’ हाम्रो समाजले स्थापित गरेको मान्यता हो, ‘विस बर्ष पारी, बिहेवारी ।’ अर्थात २० बर्ष पुरा नगरी विवाह गर्न उपयुक्त छैन । किनभने यसअघि हामी मानसिक र शारीरिक रुपले विवाहका लागि योग्य भएका […]
आरामदायी जीवनयापनका लागि ५ टिप्स
काठमाडौं, पुस ५ । भनिन्छ, सफल हुनु भनेको आफ्नो जीवनका हरेक कथाहरूको सन्तुलन मिलाउनु हो । सफलता र खुसी परिवार पर्यायवाचीजस्तै हुन् । यदि कसैले परिवार नै मिलाउन सक्तैन भने उसले व्यवसायसमेत राम्ररी गर्न सक्तैन भन्ने गरिन्छ । यद्यपि, एउटा व्यक्तिमा सम्पूर्ण पारिवारिक खर्च धान्नुपर्ने भएकाले लामो समय काममा बिताउनुपर्दा दबाब हुन्छ । यसरी बढी […]
सुन्दर देखिने चाहनाले गर्दा तीन गुणा ठूलो भयो ओठ
काठमाडौं, मंसिर-२४ । कृत्रिम सौन्दर्य उपचारका गुणभन्दा अवगुण धेरै हुन्छन् भन्नेबारे हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ तर हामी कहिलेकाँही बिर्सन्छौं कि यसको साइड इफेक्ट धेरै नै भयानक पनि हुनसक्छ । त्यहि साईड इफेक्टको शिकार भएकि छिन ल्येइस्टेस्टरकी २९ वर्षे महिला । राचेल न्याप्पियरले साथीको घरमा लिप फिलर इन्जेक्शन लगाएकी थिइन् । उनका अनुसार सुई लगाउँदा उनलाई […]